Madheshvani : The voice of Madhesh - प्रभावकारी बन्दैछ “छोरी जीवन बीमा” : गंगा पासमान
नगरप्रमुख, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा
स्थापना : २०७३, जम्मा वडा : ११, जनसंख्या : ३०,९६५, क्षेत्रफल : ७६.८४ ( वर्ग कि.मी.), समावेश गाविसहरू : कर्जन्हा, बडहरामाल, कल्याणपुर कालबञ्रूजर र गौताडी गा.वि.स. ।
० तपाइँ जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आएदेखि केकस्ता कामहरू गर्नुभयो ?
— नगरप्रमुखको रूपमा म निर्वाचित भएर आएदेखि यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यक्ता अनुसारका कामहरू अगाडि बढाएका छौं । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, कृषिलगायत क्षेत्रमा लगनशील भएर काम गरिरहेको छु । यहाँ कर्मचारी अपुग भएका कारण चाहेजति काम गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा काम गर्न हामीलाई अलिकति अप्ठ्याराहरू आइरहेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार अहिले हामीसँग विभिन्न शाखाका कर्मचारीहरू अपुग छन् । हाम्रो नगरपालिकामा अहिले अधिकृत नै छैन ।
— कर्जन्हा नगरपालिका कृषिमा आधारित भएकाले हामीले यस वर्षको बजेटमा सबभन्दा प्राथमिकता कृषिलाई दिएका छौं । त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पर्यटन लगायतका शीर्षकहरूमा बढी बजेट लगाएका छौं ।
— कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामी विभिन्न योजनाहरू ल्याएका छौं । सुख्खा क्षेत्रमा डीप बोडिङ्ग जडान गर्ने, सिंचाईका लागि विद्युत पु¥याउने, उन्नत जातका बीउबीजन अनुदानमा गराउने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । कृषिमा सबभन्दा ठूलो समस्या सिंचाईको थियो, त्यसका लागि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौं ।
० नगरपालिकाको कामबाट कर्जन्हावासी कतिको सन्तुष्ट छन् ?
— यहाँका जनता एकदम सन्तुष्ट छन् । वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा अहिले हामी आएपछि सबै आवश्यक्ता त पूरा गर्न सकेका छैनौं तर, हाम्रो कामबाट जनता सन्तुष्ट नै छन् । जनताको अपेक्षा र आकांक्षा धेरै छन् । सबै एकचोटि पूरा गर्न नसकिए पनि पूर्वाधार विकासमा हामी ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । हामीले कर्मचारी अभावका कारणले पनि चाहेजति काम गर्न सकिरहेका छौं । तर, जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गरिरहेका छन् ।
० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिन्थ्यो, सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा गएको छ ?
— हाम्रो नगरपालिकावासीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा महसुस गरेका छन् । सिंहदरबारका अधिकारहरू गाउँ–गाउँमा आएका छन् तर कर्मचारी अभावका कारण द्रूतगतिमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । तर, त्यसको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।
० निर्वाचनका बेला जनतालाई केकस्ता आश्वासन दिनुभएको थियो ?
— यहाँका जनजीवन कृषिमा आधारित रहेकोले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य प्रतिबद्धता थियो । त्यस्तै, सरकारी कामकाजमा सहजता प्रदान गर्ने, सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने, खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने, सिंचाईको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता दिएका थियौं । हामीले निर्वाचनका बेला जुन आश्वासन दिएका थियौं त्यहीं पूरा गर्न लागिपरेका छौं । हामीसँग कर्मचारी पूर्ति भइसकेपछि हामीले गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं ।
० विकास निर्माणमा प्रदेश २ सरकारसँग नगरपालिकाको कस्तो सहकार्य हुँदैछ ?
— प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले केही योजनाहरू हामीलाई दिइरहेको छ । नगरपालिकामा के–के चाहिन्छ, प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ लगायतका विषयमा हामीबीच सम्वाद पनि जारी छ ।
० प्रदेश सरकारले ल्याएको छोरी जीवन बीमा कर्जन्हा नगरपालिकामा लागू भएको छ ?
— माघ १ गतेदेखि प्रदेश २ मा जन्मिने छोरी लखपति भएर जन्मिने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीजीको प्रतिबद्धता पूर्णरूपमा लागू भएको छ । बेटी बचाउ, बेटी पढाऊ अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट निर्देशन भएको यो छोरी जीवन बीमाका लागि हामीले वडा–वडामा डाटा संकलन गरिरहेका छौं । यो योजनाले यहाँका जनता एकदम खुशी छन् । यो एकदम सराहनीय र स्वागतयोग्य योजना हो । अहिले हामीले तीन जना छोरीको दर्ता गराइसकेका छौं र अझ पनि माघदेखि जन्मिएका छोरीहरूको बारेमा खोजतलास गर्दैछौं । हामी सबै तथ्यांक संकलन गरेर यो योजना लागू गर्छौं ।
० तपाइँ काम गरिरहँदा के कस्ता समस्याहरू आउँछन् ?
— म एउटा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । तराई–मधेशमा दलितलाई हेप्ने, छुवाछूत गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि समाप्त भइसकेको छैन । म भएकोले कतिपयले सानो सानो कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै विगतमा तोडफोड र आगजनी पनि भयो । हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म पनि दलितलाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । दलित भएकै कारण मलाई हेपिएको भन्ने महसुस भयो ।
० तपाइँ हुँदा पनि दलित भएको कारण विभेदमा हुनुहुन्छ ?
— मैले त्यो भोगेको हुँ । पहिलेदेखि जुन प्रवृत्ति छ त्यो हट्न सकेको छैन । दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका मेयरलाई जुन हिसावले हेपियो त्यसले दलित समुदायमा सचेतना बढेको छ ।
० तपाइँ आफ्नो कार्यभित्र यो नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच्नुभएको छ ?
— म आफ्नो कार्यकालभित्र सबभन्दा पहिला यो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं । त्यसका लागि खेत–खेतमा पानी पु¥याउन विद्युतीकरण गर्ने, कमला नदीबाट हरेक किसानको खेतमा पानी पु¥याउने, किसानले उब्जाएको अन्नलाई व्यावसायीकरणका लागि बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायतका मेरो मुख्य योजना छ । त्यस्तै, कमला नदीको छेउमा बाझो रहेको जमीनलाई प्लटिङ्ग गरेर व्यवसायमुखी योजनाहरू ल्याउने र बेरोजगारी समस्यालाई हटाउने छौं । त्यस्तै, पिछडिएका समुदायहरू खासगरी दलितहरूको जीवन उकास्नका लागि सबभन्दा बढी शिक्षामा जोड दिने, जनचेतना कार्यक्रम गरेर शीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने लगायतका क्षेत्रमा मेरो मुख्य ध्यान केन्द्रित छ । म आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा जनतालाई अनुभूति दिलाउने छु ।